Jennifer Bailey dia niresaka momba ny Apple Pay sy ny fitomboany tamin'ny taona 2018 | Avy amin'ny mac aho
Tamin'ny fiandohan'ny volana Janoary, Jennifer Bailey, Lehiben'ny fampandrosoana sy fanitarana Apple Pay, nanatrika fivoriamben'ny National Retail Federasiona tany New York, izay nandinihany ny fiantraikan'ny Apple Pay amin'ny fanjifana ny mpanjifa sy amin'ireo fivarotana antsinjarany izay mampiasa io haitao io.
Niresaka momba azy i Bailey tanjona latent ao amin'ny Apple hanova tanteraka ny traikefa fiantsenan'ny mpampiasa, amin'ny dingana rehetra, amin'ny alàlan'ny iPhone, mametraka an'ity fanovana ity amin'ny fampiharana, programa momba ny tsy fivadihana ary fiaraha-miasa eo amin'ny orinasa sy ireo teknolojia samihafa atolotry ny Apple.
Ny fisehoana vaovao toa ireo natolotry ny ARKit, TrueDepth na Apple Pay, dia ahafahantsika manova ny fomba fahitantsika sy fanaovantsika zavatra, manatsara ny zavatra niainantsika amin'ny orinasa iray. Amin'izany fomba izany, hoy i Bailey, "Mihena be ny dingana hividianana fividianana."
Amin'ny lafiny iray, ny fitomboan'ny sehatra dia zava-misy, hita taratra amin'ny isa tamin'ny taon-dasa 2017, ary mandritra ny taona 2018 vao miakatra ireo angona ireo
“Ny serivisy dia natomboka tamin'ny faneken'ny 3% monja amin'ireo mpivarotra antsinjarany amerikana, saingy ankehitriny dia tohanan'ny 50% amin'ireo magazay manerana ny firenena. Izy io no teknolojia fandoavam-bola tsy misy ifandraisany indrindra eto amin'izao tontolo izao. "
Amin'ny tenin'i Jennifer Bailey manokana, Apple dia manolo-tena mafy amin'ny fivarotana antsokosoko, izay hitany fa fotoana tsy manam-paharoa hanitarana ny serivisy ampiana lanjany, tsy any Etazonia ihany, fa amin'ny eran'izao tontolo izao koa.
"Ny fivarotana ara-batana dia toerana iray lehibe ahafahanao mifanerasera mifanatrika amin'ny mpanjifa, azonao atao ny mifantoka amin'ny fifandraisan'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fanaovana fampiharana mahomby kokoa. Afaka mahita sy mividy serivisy sy vokatra amin'ny fomba vaovao isika, manomboka amin'ny vokatra mandritra ny androm-piainana ka hatrany amin'ireo vokatra namboarina, ary mbola hivoatra hatrany izahay. Isika mihitsy dia mpivarotra ary mizara ny fotoana mety sy ny fanamby amin'ity karazana varotra ity izahay. "
Apple Pay dia manohy manitatra amin'ny lafiny rehetra, ary ity dinamika ity dia andrasana hitohy amin'ny taona 2018, ary afaka mampiasa an'io sy serivisy manavakavaka hafa izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Jennifer Bailey dia niresaka momba ny Apple Pay sy ny fitomboany tamin'ny taona 2018